आमा आईसियुमा, बुबा प्रहरी हिरासतमा, चार महिने छोरीलाई कसरी बचाउन ? - Sudur Khabar
आमा आईसियुमा, बुबा प्रहरी हिरासतमा, चार महिने छोरीलाई कसरी बचाउन ?
उदयपुर, पुस १५ । दुई हप्ता अघि श्रीमानको कुटाइबाट सिकिस्त बिरामी भएकी उदयपुरकी सरिता मोतेका नाबालक छोराछोरी बिचल्लीमा परेका छन् । उदयपुरको भलायडाँडा– ३ कि सरितालाई श्रीमान जीवनले पुस १ गते कुटपिट गरेपछि उनी अस्पताल भर्ना भइन् । श्रीमानलाई प्रहरीले पक्रियो । आमा अस्पताल भर्ना र बुबा प्रहरी हिरासतमा भएपछि उनीहरुका तीन छोराछोरीको बिचल्ली भएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका सरिताका ससुरा होमबहादुरले घरजग्गा समेत तीन लाख रुपैयाँमा बिक्री सरिताको उपचार गरे पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि मोते परिवार आर्थिक संकटमा परेका छ । आर्थिक समस्याको बारे बुवा होमबहादुरले भन्नुभयो, ‘घरजग्गा सक्दा पनि बुहारीको होस आएको छैन, डाक्टरले अझै पैसा लाग्छ भनेको छ ।’